Faritra Atsimo Andrefana : Natolotra ny vahoaka ny RN9 -
AccueilRaharaham-pirenenaFaritra Atsimo Andrefana : Natolotra ny vahoaka ny RN9
01/09/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Toa ny tamin’ireo tanàna nolalovany nandritra ny andro maromaro, dia noraisin’ny vahoakan’i Toliara tamin’ny horakora-pifaliana sy endrika miramirana ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly.
Tamin’izany fandalovany tao Toliara izany indrindra no nitokanany ary nanolorany ny vahoakan’Atsimo Andrefana fotodrafitrasa roa goavana dia ny Lalam-pirenena fahasivy (RN9) sy ny biraom-paritry ny Fitaterana sy Famantarana ny toetr’andro.
Ho an’ny lalana RN9 manokana, izay mampitohy mivantana an’i Toliara sy Morombe. Ny taona 2014 no nametrahan’ny Filohan’ny Repoblika ny vato fototr’izany. Naharitra 30 volana teo ho eo kosa ny faharetan’ny fanarenana ny dingana voalohany, mirefy 107 km mampitohy an’i Toliara sy Analamisampy. Ity dingana voalohany amin’ny RN9 ity no natolotry ny Filohan’ny Repoblika ny vahoaka amin’iny faritra iny omaly. Marihina fa fiaraha-miasan’ny fanjakana malagasy tamin’ny Banky Afrikanina ho an’ny Fampandrosoana na ny Bad izany, ary ny orinasa sinoa China Railways kosa no nandray an-tanana ny fanamboarana.
Ankoatra izay, voalaza fa mbola hamatsy vola amin’ny fanamboarana ny dingana faharoa amin’iny RN9 iny ny Bad, ary hanome vola mitentina 15 Tapitrisa Dolara hanatanterahana ny ambin’ny asa fanarenana raha misy ny fitohizan’ny fiaraha-miasa eo amin’ny Fanjakana. Marihina mantsy fa tsy afaka nampiasaina mihitsy ny Lalam-pirenena fahasivy ary saika nampikatso ny fiainan’ny mponina tamin’iny faritra iny izany. Amin’izao fotoana izao, hampiroboro ny tontolo ara-toekaren’ny Faritra Atsimo Andrefana ny fahavitan’ny RN9 satria hampivelatra ny fizahantany any an-toerana ny fahafahana mitsidika ny torapasik’Ifaty sy Mangily, izay tena anisan’ny ankafizin’ireo mpizaha tany vahiny, sns. Eo ihany koa ny fahafahan’ny vokatra amin’ireo kaomina any an-toerana mifamezivezy.
Nambaran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina tamin’izany fa mahalala ny tena maharary ny vahoaka ny tenany, ary mitondra vahaolana maharitra ho amin’izany izy…
Ny fanatanterahana fitokonana dia zon’ny sendika tokoa ny manao ny fitokonana, fa fandikan-dalàna kosa ny fanohintohinana ny fitohizan’ny raharaham-panjakana , satria tsy zon’ny mpitsara velively ny manakatona ny vavahadin’ny fitsarana hoy i Razafiherison Hery Harizandry ...Tohiny